Nagarik Shukrabar - उसलाई नसोची रहनै सक्तिनँ
शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०६ : १५
उसलाई नसोची रहनै सक्तिनँ
मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६, १२ : ४४ | शुक्रवार
एउटासँग प्रेम सम्बन्ध हुँदाहुँदै अर्कै केटासँग लाग्ने केटी कस्ता हुन् ? जबकि पुरानै प्रेमीले उसलाई अति माया गर्छ। जहाँ भन्यो त्यहीँ पुग्छ। त्यो पनि भनेको समयमा।
के अरुको चैँ मन हैन र ? आफ्नो मात्रै खुसी हेर्ने कस्ता कप्टी हुने हुन् मान्छेहरु ! भेट हुँदा पूरा प्रमिस रे ! बाउआमा, कुल देवता, भगवान् कसम रे ! उसको र मेरो सम्बन्ध तीन वर्षको हो। हामी दुवै विद्यार्थी हौँ। दुवै जनाको परिवार पनि राम्रो थियो।
हामी पढ्ने कलेज भने फरक थियो। उसका धेरै साथीलाई मैले पनि चिन्थेँ। उसले मेरा साथी पनि चिन्छे। सबै कुरा राम्रो चल्दै थियो। मेरो पढाइ केही बिग्रियो। ब्याक पेपर छ। काम पनि गर्न थालेको छु। जिम्मेवार छोरो हुने प्रयत्न गरिरहेको छु। ऊ पनि अहिले पढ्दै छे।
मैले पढाइ भने छोडेँ। काम गर्न थालेपछि समय नदिएको भन्दै रिसाउन थाली। गुनासो पनि कस्तो ! राम्रो र मीठो नखाएको धेरै भयो रे ! राम्रो रेस्टुरेन्ट नलगेको गुनासो आइरहन्थ्यो तर उसको फुर्माइसी कुरालाई पूरा गर्न सकिरहको छैन।
मोबाइलामा ब्यालेन्स हालिदिन्थेँ। पहिला धेरै रेस्टुरेन्ट गइयो र सँगै बसियो, सँगै खाइयो। यसको कुनै हिसाब किताब छैन। सायद यसो नगरेको भए सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्ने पैसा जम्मा हुन्थ्यो होला। पछिल्लो समय आमा बिरामी हुनुभयो भनेर घर गएकी थिई।
अहिले सुन्दैछु, ऊ मभन्दा पनि धनी केटासँग सम्बन्धमा छे। उसलाई भेटेर रोएँ पनि तर उसले त उल्टै गिज्याउने शैलीमा भनी, ‘पहिला मलाई शंका गर्थिस् नि हैन ? तेरो घरबार नहोस्, तैँले यस्तै जिन्दगी गुजार्नु परोस् !’
उसको व्यवहार र बोली सुनेर म चकित मात्र भइनँ, चार घण्टासम्म रोएँ। उसका साना साना फर्माइसीका लागि आफ्नो काम छाडेर जान्थेँ, पढाइलाई अलपत्र पारेर उसका लागि जान्थेँ तर यी सबै बेकार भए। मेरा स–साना त्यागको मूल्य रहेन।
मैले धेरै माया, हेरविचार, विश्वास र सम्मान गरेको थिएँ। अझै पनि माया गर्छु उसलाई। उसलाई नसोच्न धेरै प्रयास गरेँ तर उसका बारेमा नसोची रहनै सक्तिनँ।
नेप्लिज टिनएजर्स कन्फेसन्स